Chile waxay qorsheyneysaa inay ka saarto dhirta dhuxul dhagaxda | Cusbooneysiinta Cagaaran
Haddii ay siyaasiyiintu isku raacaan, Chile waxay qaadaysaa tallaabo aad u ballaaran oo ay horay u qaadday siyaasad dib loo cusboonaysiin karo. Wadanka Chile wuxuu rabaa in uu dhaqaalihiisa ka dhigto 2050.
Xaqiiqdii, Chile waxay soo jeedisay in aan la bilaabin horumarinta dhirta cusub ee dhuxusha laga sameeyo, kuwaas oo aan lahayn nidaamyo qabasho iyo kaydinta kaarboon ama tiknoolajiyad u dhiganta. Intaa waxaa dheer, waxaa ka mid ah in la xiro jadwalka xarumaha noocaan ah ee hadda jira.
Go'aanka waxaa qaatay inta badan importantes ee dalka, sida AES, Colbun, Enel iyo Engie oo heshiis la galay dowladda ay hogaamiso Michelle Bachelet.
Anagoo rajaynayna balanqaadyadeena Heshiiska Paris oo ay ku mahadsan tahay wada shaqeynta shirkadaha soo saara, Chile waxay yeelan doontaa horumar xaddidan. Ma dhisi doono dhir badan oo dhuxul dhagaxda laga shido, si tartiib tartiib ah ayaan u xiri doonnaa oo aan beddeli doonnaa kuwa jira, ”ayuu yiri madaxweynaha oo bartiisa Twitter-ka soo dhigay, oo la xiriira qorshahan, oo dhigaya Chile safka hore ee dadaalada laga sameynayo Latin America si loola dagaallamo cimilada. isbeddel (dhacdo ka dhalatay dhuxul, gaasaska kale ee lagu keydiyo).
1 Cusboonaysiinta maanta
1.1 Faa'iido badan
Waqtigaan, 40% korantada Chile waxaa laga soo saaraa dhirta heerkulbeegga ee la siiyo dhuxusha, taas oo ka dhigaysa tan isha ugu weyn ee dhalinta korantada ee dalka. Si kastaba ha noqotee, isbeddelka tamarta ee ay qaadaneyso wuxuu la jaan qaadayaa horumarka muhiimka ah ee teknoolajiyada dib loo cusboonaysiin karo ayaa lahaa dalka gudihiisa:
Dib u cusbooneysiinta laga bilaabo Maarso 2014 kaliya waxay u dhigantaa 7% wadarta jaantuska, kaas oo labalaabmay Maarso 2017. Tan ugu xoogeysan waa tamarta qorraxda, taas oo sida uu sheegayo Guddiga Tamarta Qaranka bishii Febraayo ee sanadkan, 76% ee mashaariicda u dhigantaa qalabka korontada ku shaqeeya ee qoraxdaMarka, Nidaamka Isku-Xidhka Dhexe 5% wuxuu ka yimaadaa tamarta noocan ah. Waxa kale oo jira mashruucyo dabayl iyo haydarooliya.
Ka sakow noqoshada waarta, dib-u-cusboonaysiinta ayaa faa'iido badan leh, ama warbixino dhowr ah oo ku saabsan saameynta dhaqaalaha ayaa leh: LWarshad sawir leh oo loo yaqaan 'El Romero Solar photovoltaic', oo loo xilsaaray kuna xiran shabakadda sanadka 2016, ayaa shaaca ka qaaday inta lagu guda jiro nolosheeda waxtarka leh, oo lagu qiyaasay 35 sano, inay ku biirin doonto 316 milyan oo doolar waxsoosaarka guud ee gudaha (GDP), “laba jibaar kan dhirta dhuxusha u dhiganta ee u dhiganta.
El Romero Solar, oo leh 246 MWp, oo ah warshadda ugu weyn ee loo yaqaan 'photovoltaic' ee Latin America markii ay hawlgallada bilaabaysay
Sida laga soo xigtay Wasiirka Tamarta ee Chile, Andrés Rebolledo “Waxaan leenahay shuruudo aan caadi aheyn oo loogu talagalay horumarinta tamarta la cusboonaysiin karo. Waxaan sameynay hadaf taas oo ah sanadka 2050-ka ugu yaraan 70% shaxda waxay ku saleysan tahay iyaga, waxaana gaari karnaa illaa 90% ”.
ka shirkadaha korontada waxaad moodaa inay la jaanqaadayaan dowlada. Tani waa sida ay u muujiyeen, bayaan wadajir ah, oo ka soo baxay Wasaaradda Tamarta iyo Ururka Generators: “Thanks to hoos u dhaca weyn ee ku yimid kharashka iyo isku darka tiknoolajiyada jiilka la cusboonaysiin karo ee lagu soo daray matxafkeena, warshadaha dhalinta korontada ayaa u muuqda mustaqbal sii cusboonaysiin kara ”.
Go'aanka Chile wuxuu la jaan qaadayaa kala-goynteeda horumarka ah wuxuuna muujinayaa wadada weyn ee tamarta la cusbooneysiin karo ku furtay faa iidooyinkeeda”, Points ayaa tilmaamaya, markooda, Enrique Maurtua Konstantinidis, agaasimaha isbadalka cimilada ee Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sidaa darteed, dowladdu waxay iftiimisay dib-u-habeynta qotada dheer ee la hirgeliyay sanadihii la soo dhaafay iyadoo ka jawaabeysa siyaasadaha guud ee loogu talagalay in lala kaashado jilayaasha bulshada iyo kuwa gaarka loo leeyahay, iyadoo la hubinayo in "qaybta tamarta ay horseed u tahay maal-gashiga ayna ku guuleysatay inay yareyso qiimayaashoodaWaa diirad soo jiidashada ganacsiyada cusub waxayna leedahay heer sare oo tartan ah ”.
Agaasimaha Fulinta ee Sawirka Chile, Myriam Gómez, ayaa yiri “shaki la’aan, shaxda oo diiradda saareysa tamarta la cusboonaysiin karo iyo adeegsiga kheyraadkeena dabiiciga ah si masuuliyad leh, qaadida tillaabooyin waara oo loo qaado mustaqbalka, ayaa ah dhinacyada muhiimka u ah muuqaalka dalkeenna. Xaqiiqdii, sida ku xusan warbixinta 2017 ee latalinta caalamiga ah Ernst & Young, Index Soojiidashada Tamarta Cusboonaysiinta, waddanku wuxuu kujiraa kaalinta lixaad adduunka oo dhan ka mid ah quruumaha fursadaha ugu fiican ee horumarinta NCRE ”.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Chile waxay qorsheyneysaa inay joojiso dhirta dhuxusha